18+ သမားများအတွက် ~ Nyi Hla Myo
Nyi Hla Myo
မင်္ဂလာပါ ညီလှမျိုး ဘလော့လေးမှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘလော့လေးမှ နွေးထွေးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ် နောက်လဲလာလည်ကြပါအုံးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်တတ်သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပေးရာမှာ အမှားများပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာစာ Font မမှန်လို့ ဖတ်မရရင် အောက်က စာကိုနှိပ်ပါ
မြန်မာစာ မမှန်လျှင် ဤစာကိုနှိပ်ပါ
2:25:00 AM ကိုကိုတို့အတွက် No comments
=> မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကို နှိပျပါ။ <=
မင်္ဂလာပါ။ ဒီPostလေး ကတော့ အသက်18နှစ် ပြည့် ပြီးသူများသာ ဖတ်ရမယ့် Post လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီPost လေးမှာ 18+သမားများနှင့် သာယာချမ်းမြေ့သော မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လိုသော အိမ်ထောင်ရှင်များ အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာတွေ လွယ်ကူအဆင် ပြေစွာ ကြည့်ရှု Downloadလုပ် နိုင်မယ့် siteလေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကဲခုမှ ဟိုလို၂ဒီလို၂ လုပ်မနေနဲ့ လိုအပ်ရင် ဝင်ဒေါင်း တွေ့တုန်းဒေါင်းထား။ ပြီးတော့မှ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ Accတွေ ဖွင့်မရတာ ဘယ်နှစ်ခု ရှိPလဲ???
18+ Site Link
18+ Site Link Here
*ပြာပုံထဲက ရွှေကို တွေ့အောင် ရှာပါ*
ဒီPost တင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
သိပြီးသူများ ကျော်ဗျာ။ ယနေ့ခေတ် Facebook လူမှု ကွန်ယက်ပေါ်တွင် တွေ့နေရသော အခြေအနေများ ဖြစ်ပါသည်။
18+ Videosများကို ဒေါင်းလဲဒေါင်းချင် သူများပြောရမှာလဲ အခက်ဖြစ်နေသော သူများရှိနေပါသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်သိပါ။ ယောက်ျားလေး များမှာ Friများဆီက အလွယ်တကူ ကူးနိုင်သည် မိန်းကလေးများ မှာလည်း ဝါသနာတူ ပွင့်လင်းသူFriများ တွေ့ရင် အလွယ်တကူပါပဲ။ Zapya ကဲ့သို့သော Apkမျိုးနဲ့ ကူးနိုင်ပါသည်။
အဓိက ကတော့ အရှက်အကြောက် ကြီးပြီး တစ်ကိုယ်တည်း သီးသန့်နေတတ်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိအနေနှင့် သူများလည်းမပြောချင်။ အကြောင်းလဲမသိ ဒီတော့ Facebookအကောင့် နှင့် အလွယ်တကူရှာ ရသည်ဆိုပြီး အကောင့်ရဲ့ Search Barမှာ မိမိတို့ ဦးတည်ချက်ကို ချရေးပြီး ရှာပါတယ်။
တွေ့ပါပြီ။ မိမိဦးတည်ချက် Link! Download ဆွဲမယ်ပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ User Name & Password တောင်းတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လဲ ဝင်တယ်ကွာ။ ရိုက်ထည့် ဝင်။ Fake Linkဆိုတော့ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် ဒီတော့ ပြန်ထွက်။ (ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ လုပ်မရလို့ ပြောချင်သော်လည်း မပြောဝံ့) နောက်ထပ် Linkထပ်ရှာ။
ဒီမှာတင် မိမိအကောင့် User name & Password တွေ သူများဆီ ရောက်သွားတာ မသိရှာပါ။ နောက်နေ့ Facebookဖွင့် မရမှ ဟိုလူကယ်ပါ ဒီလူကယ်ပါ လုပ်နေမယ့်အစား တွေ့ရာLinkတွေ ဝင်တတ်တာတွေ အလွယ်တကူရှောင်ပါ။
Sexy Linkများတင် မဟုတ်ပါ။ တခြား Cocကဲ့သို့သော ဂိမ်းPageမျိုး တွေမှာ Gems FreeဆိုP Linkတုတွေ တင်ထားတတ်ပါတယ်။ အလားတူ တခြားတခြားသော လူစိတ်ဝင်စားလွယ်သည့် ကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍ အဆိုပါ Linkအတုများ ဖန်တီးကာ အကောင့်ခိုးယူ နေသော အဖွဲ့အစည်းများ များစွာရှိပါသည်။ ထိုနည်းကို ငါးမျှားသည်ဟု ခေါ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
များသောအားဖြင့် ငါးများချိတ် လင့်များ အစတွင် wapkaများပါရှိတတ်ပါသည်။ တခြားစာပါရှိသော Linkများလဲ ရှိပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကတော့ wapkaဆိုတာ ပါရှိပါသည်။
wapka ပါတိုင်းရော Linkအတုလား မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေကို သတိထားနိုင်အောင် ပြောတာပါ။ မသင်္ကာရင် အကောင့်အစစ်ရိုက်မထည့်ပဲ စမ်းကြည့် နိုင်ပါတယ်။
ထို ငါးမျှားချိတ် Linkနှင့်ပင် Fake Application များရှိပါသည်။ ဥပမာ Fb video downloader ကဲ့သို့သော Apk နာမည်များတွေ့တိုင်း အကောင့်မဝင် မိပါစေနှင့်။ Fb Free Get Likeစသည့် Apkများ ဖြစ်ပါသည်။ သေချာကြည့်လျှင် Fb Pageနှင့်မတူသော အချက်များ ပါရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် အကြောင်းမသိသေးသော ကျွန်တော်၏ ချစ်Fri Normal Userများ အနေနဲ့ အဆိုပါ မသင်္ကာဖွယ်ရာ Linkတုများကို မဝင်မိစေရန်နှင့် ဝင်မိသော်လည်း မိမိအကောင့် User Name & Passမထည့် မိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤPostကို ရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်သော မိသားစု ဘဝနေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
လာလည်သည့်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
** အသစ်တင်တိုင်း Faccebookမှာ ဖတ်ရန် **
>> http://bit.ly/1TH1GM6 <<
မင်္ဂလာပါ အဆင်မပြေတာလေးတွေ မန့်ခဲ့စေချင်ပါတယ်။စိတ်ကြိုက် Shareနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ( မင်ျဂလာပါ အဆငျမပွတောလေးတှေ မနျ့ခဲ့စခေငျြပါတယျ။ စိတျကွိူကျ Shareနိုငျပါတျခငျဗြာ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြာ။ )
မွနျမာစာ Font မမှနျလို့ ဖတျမရရငျ အောကျက စာကိုနှိပျပါ။
မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကိုနှိပျပါ
ကျွန်တော့် Friends တွေရဲ့ ဘလော့လေးတွေလဲ အားပေးကြပါအူး
18+သမားများ အတွက် (ချစ်သူလေး Blog)သို့ သွားရန်
ADB Commend (အခြေခံ) လေ့လာလိုသူများ အတွက် (1)
Android Appalications (72)
Auto အချိန် ပြောပေးမယ့် Apk (1)
Blogဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (1)
COC Update Versions (1)
Destop Site အလွယ်တကူ ပြောင်းနိုင်တဲ့ apk (1)
Download ဆွဲနည်းများ (1)
Facebook/Messenger Last Update (6)
Facebookဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (5)
Firmwareအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း (About Firmware) (1)
Free domain ရယူနည်း။ (1)
IDကတ် အတုတစ်ခု အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်တဲ့ Apk (1)
Keyboards ဆိုင်ရာများ (1)
Launchers ဆိုင်ရာများ (1)
Log Apps (7)
Lucky Patcher ဆိုင်ရာများ (2)
Messageကို ပို့ချင်တဲ့အချိန် Autoပို့ခိုင်းမယ်။ (1)
Paypal ဆိုင်ရာ (1)
Update Applications (1)
Videos ဆိုင်ရာ (2)
Wallpapers and Photos Winder (2)
ကိုပိုက် စွန့်စွန့်စားစား လုံးချင်း မုဆိုးဝတ္ထုများ (1)
ကိုယ်ပိုင် ကဗျာ စုစည်းမှု (6)
ဂီတာ/ စန္နယား/ ဘင်ချို/ ဒရမ် ဂီတ တူရိယာများ (1)
ငါးဘာသာ စကားပြော စာအုပ် (1)
စွန့်စွန့်စားစား လုံးချင်းဝတ္ထုများ (4)
စာအုပ်ဖတ် Apps (1)
ဓါတ်ပုံ ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာများ (2)
နည်းပညာ စာအုပ်များ (9)
ဖုန်းနဲ့ Pdfစာအုပ်ရေးမယ် (1)
ဖုန်းလှုပ်ပြီး Lock ချမယ်။ (1)
ဖုန်းဘေမကုန်ပဲ Androidချင်း စကားပြောလို့ရမယ့် Apk (1)
ဖုန်းလေးခြင်း Wifi & Data အလိုလို ပွင့်နေသူများ အတွက် ဖြေရှင်းနည်း (1)
မြန်မာ (Unicode/Zawgyi)+English သုံးမျိုးရိုက်နိုင်မဲ့ Keyboard (1)
မြန်မာ နှစ်၁၀၀ ပြက္ခဒိန် (1)
မြန်မာစာ Font ဆိုင်ရာများ (3)
အင်တာနက် ဖရီး (1)
အဘမင်းသိင်္ခ စာအုပ်များ (26)အုပ် (1)
အမည်မသိ ဖုန်းတွေရန်က ကာကွယ်တားဆီးဖို့ အသုံးဝင်Apkလေး (1)
အဝင်ဖုန်း / မက်ဆေ့ခ်ျ အတုတွေ ဖန်တီးမယ်။ (1)
ခေါ်ချင်တဲ့အချိန်ကို နှိုးစက်လို ထားပြီး Auto ဖုန်းခေါ်တဲ့ App (1)
ငွေရှာနည်း (Adf.lyဆိုင်ရာ) (2)
လေချွန်ပြီးLogချမယ်။ (Whisle Log Apk) (1)
နှစ်သက်ရာ Videosလေးခုကို တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်နိုင်မယ့် Apk (1)
နိုင်ငံတကာ မည်သည့်ဖုန်းကို မဆို Freeခေါ်နိုင်တဲ့ Apk (1)
COC Myanmar Font
=> မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကို နှိပျပါ။ <= မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်လို COCဆော့သူများ အတွက် မြန်မာFontလေး တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။လူ...
=> မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကို နှိပျပါ။ <= မင်္ဂလာပါ။ ဒီPostလေး ကတော့ အသက်18နှစ် ပြည့် ပြီးသူများသာ ဖတ်ရမယ့် Post လေးဖြစ်ပါတယ်။ ...
မြန်မာ (Unicode/ Zawgyi)+ English စုစုပေါင်း သုံးမျိုးရိုက်နိုင်မဲ့ ပြင်ပြီးသား Frozen Keyboardလေး
=> မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကို နှိပျပါ။ <= မင်္ဂလာပါ။ Android ဖုန်းမှာ မြန်မာ (Unicode/ Zawgyi)+ English စုစုပေါင်း သုံးမျိုးရိ...
Online ကာရာအိုကေ သီချင်းဆိုနိုင်မယ့် SMULE Apk(VIP ACCEPTပါဝင်P)
=> မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကို နှိပျပါ။ ကဲ ဒီတစ်ခါ တင်ပေးမှာကတော့ ကာရာအိုကေ သီချင်းဆိုတဲ့ Smule ဆိုတဲ့ Apkကို ဘာမှမလုပ်ပဲ အကောင့...
Android Phone တွေကို Rootမလို မြန်မာစာစနစ် မှန်အောင်သွင်းပေးနိုင်မယ့် App
=> မွနျမာစာ မမှနျလြှငျ ဤစာကို နှိပျပါ။ <= Android Phone တွေကို Rootမလို မြန်မာစာစနစ် မှန်အောင်သွင်းပေးနိုင်မယ့် App လေးပ...
Launcher လန်းလန်းလေး သုံးချင်သူများအတွက်
ဖုန်းခေါ် Keyboard လန်း၂လေး (အဝင်လဲ အသည်းပုံလေး တွေ...
မြန်မာ (Unicode/ Zawgyi)+ English စုစုပေါင်း သုံးမ...
အမည်မသိ ဖုန်းတွေရန်က ကာကွယ်တားဆီးဖို့ အသုံးဝင်Apkေ...
မိမိပုံကို Anonymous မျက်နှာဖုံးလေးတွေ တပ်ဆင်နိုင်...
Android ဖုန်းပေါ်မှာတင် ပုံလန်းလန်းလေးတွေ လုပ်နိုင်...
ဖုန်းပေါ်မှာ Anonymous (Hacker) ပုံလေးတွေကို Wallpa...
မိမိဖုန်းမှာ လုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးကို ဗီဒီယို အလွယ်...
Multiအကောင့် သုံးနိုင်မယ့် Apk3ခု Download Links
Hackerမျက်နှာဖုန်း လေးတွေနဲ့ မိမိမျက်နှာကို အစားထိ...
Android Phone တွေကို Rootမလို မြန်မာစာစနစ် မှန်အော...
အဘ မင်းသိင်္ခရဲ့ စာအုပ်များ (25)အုပ် မြိုင်ဟေဝန် အပါ...
Sensor ရှေ့ လက်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ Logပိတ် Screen off လ...
Apkများ ကို နှစ်ခုခွဲ သုံးချင်သူများအတွက် Cloneလုပ...
ဖုန်းမှာ ကွန်ပျူတာ ဖိုင်မန်နေဂျာ ပုံစံလေးနဲ့ လန...
မှိုပွင့်လေးတေကို ပျံဝဲနေတဲ့ လိပ်ပြာလေးများ 3D Wall...
သမင်ပုံ သဘာဝရှုခင်းလေးနဲ့ 3D Wallpaperအရှင်လေး
ငွေရှာနည်း (Adf.lyဆိုင်ရာ စာအုပ်များ)
Blogအသုံးပြုနည်း ဆိုင်ရာစာအုပ်များ (အခြေခံမှစ၍ အလှ...
Facebook ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (၈အုပ်)
ကပ္ပတိန် ကောလင်းနှင့် တစ္ဆေလှေ
Facebookကို Gmailနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ Friများအတွက် အကော...
ကိုပိုက် စွန့်စွန့်စားစား လုံးချင်း မုဆိုးဝတ္ထုများ...
ကိုပိုက် "မထူးဆန်းသလို ထူးဆန်းမဆုံး တောင်ပေါ်ရွာ တေ...
နှစ်သက်ရာ Videosလေးခုကို ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာတင် တစ်ြ...
Facebookကို Proတစ်ယောက်လို အသုံးပြုနည်း
Sexy Virous ဖြေရှင်းနည်း
Dream- League mod apk (Game)
ဆားပုလင်း နှင်းမောင်နှင့် ဓါးနှစ်လက် ရုပ်ပြစာအုပ်
IDကတ် အတုတစ်ခု အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်တဲ့ Apk
Use this li
Copyright © Nyi Hla Myo | Powered by Blogger